J@M - Episode2- Applying forajob - Myanmar Network
J@M - Episode2- Applying forajob
Posted by Myanmar Network on April 5, 2012 at 15:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
* Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါက အထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
Jam - The Web Design Company That Teaches You English
2. အလုပ်လျှောက်ထားခြင်း (Applying forajob)
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က Jam က director ဖြစ်တဲ့ Alison က Jam မှာလုပ်စရာအလုပ်တွေများလွန်းလို့ Web designer အသစ်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ လုပ်နေရာလစ်လပ်ကြောင်းကြော်ငြာခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာမှတ်မိမှာပါ။
အခုသူမက အလုပ်လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ လျှောက်ထားစာတွေကိုကြည့်ရင်း Jeff ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။
“ဒီတစ်ယောက်တော့ပို အဆင်ပြေပုံပဲ။ ကောင်းပြီ။ Jeff ရေ။ သူ့ကို လူတွေ့ စစ်ဆေးခေါ်အောင်” တဲ့၊၊
Sanjeev ကတော့လျှောက်ထားသူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ နောက်နာရီဝက်လောက် ကြာတော့ အလုပ်လျှောက်ထားစာတွေ ထပ်ရောက်လာပါတယ်။
“နောက်ထပ် အလုပ်လျှောက်ထားစာတွေ ထပ်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီတစ်ယောက်တော့ သင့်တော် တဲ့ အလုပ်အတွေ့အကြုံ လဲရှိတယ်။ သူ့စာကလဲကောင်းတယ်။”
ဒါပေမဲ့ Alison ကတော့စိတ်ကြိုက်မတွေ့ပါဘူး။
စာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ (structure) ကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်။ စာရဲ့ညာဖက်ထောင့်မှာကိုယ့်လိပ်စာ (အခုနောက်ပိုင်းဘယ်ဖက်ချည်းပဲလဲကပ်ရေးကြတယ်)
အောက်ဖက်ဘယ်ဖက်ကပ်ပြီးအလုပ်ရှင်နဲ့ကုမ္ပဏီလိပ်စာ။ ပြီးတော့တစ်ကြောင်းခြားရက်စွဲ၊ ပြီးတော့တစ်ကြောင်းခြားစာဖတ်မည့်သူကိုနာမည်ခေါ်။ (ဒီနေရာမှာ နာမည်သိပြီးသားမို့ Dear Sir/Madam လို့မရေးဖူး။ အမျိုးသမီးမို့လို့၊ အိမ်ထောင်ရှိမရှိလဲမသိလို့ Ms ကိုထိပ်မှာတပ် Family name ‘Lime’ နဲ့တွဲပြီး Ms Lime လို့ခေါ်တာမှတ်ထားရ မယ်။)
စာကိုယ်ပိုင်းကိုနိဒါန်းပျိုးစာပိုဒ် (Introductory Paragraph) နဲ့စတယ်။ စာကိုယ်ကိုလည်း တစ်ပိုဒ် နဲ့ တစ်ပိုဒ် စာတစ်ကြောင်းခြားတာသတိပြုမိမှာပါ။
စာဖတ်သူအမြင်ရှင်းတော့ကိုယ့်စာကိုသူပိုပြီးနားလည်လွယ်တာပေါ့။ အခု * ရဲ့စာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်။ စာလုံးမဲတွေကိုဂရုစိုက်ပြီး ကြည့် မယ်နော်။ သူတို့က အတွဲလိုက်မှတ်ထားပြီး စာရေးတဲ့အခါ ပြန်သုံးသင့်တဲ့အသုံး အနှုန်းတွေပါ။
I am writing in response to your advertisement in Design Weekly for the post of designer.
ကျွန်တော်သည် Design Weekly စာစောင်မှာပါသော Designer ရာထူးအလုပ်ကြော်ငြာ နှင့်ပတ်သက်ပြီးလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
My CV is attached.
ကျွန်တော်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် (CV: Curriculum Vitae) ကိုနောက်ဆက်တွဲဖော်ပြထားပါသည်။
Currently, I amadesigner for the Philip Brown Agency …
လက်ရှိကျွန်တော်သည် Philip Brown Agency မှ designer တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
…….. where I am responsible for designing web pages and brochures.
ဤကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်တော်သည် web page များနှင့် brochure လက်ကမ်းစာစောင်များဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်းကိုတာဝန်ယူရပါသည်။
I haveadegree in graphic design and an MA in multimedia technology.
ကျွန်တော်သည် graphic design နှင့်ဘွဲ့ရထားပြီး multimedia technology နှင့်မဟာဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ကိုရယူထားပါသည်။
To discuss this application further, I am available for interview at your convenience.
ယခုလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးလိုပါက ကျွန်တော်သည် လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အဆင်သင့်ရှိပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့် (ဒီနေရာမှာလည်းခုနအစ မှာ Ms Lime လို့ခေါ်လို့ဒီလိုအဆုံးသတ်တာပါ။ Dear Sir/ Madam ဆိုရင် Yours faithfully လို့တပ်ကြပါတယ်။
နောက်ထပ်မှတ်သားစရာက စာကြောင်းတွေမှာ အတိုကောက် (Contracted Form) ဖြစ်တဲ့ I'm လို့မရေးပဲ I am လို့အရှည်အပြည့်အစုံရေးရတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ရုံးစာ (formal letter) ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပြောစကားနဲ့မရေးပဲ ရုံးသုံးစကားဆန်အောင် ရေးရတာပါ။
Sanjeev ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကဘာလဲ။ (What is Sanjeev job now?)
ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲ။ (What exactly does he do?)
သူ့မှာ ဘာပညာရေးနှင့်အလုပ်အရည်အချင်းဘာတွေရှိလဲ။ (What are his qualifications?)
Q. What is Sanjeev’s job now?
A: He isadesigner for the Philip Brown Agency.
Q: What exactly does he do?
A: He is responsible for designing webpages and brochures.
A: He hasadegree in graphic design and an MA in multimedia technology.
for the Philip Brown Agency.
for + Noun/V-ing
for designing web pages and brochures.
in graphic design.
in multimedia technology.
ကဲ - အခုဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်စာကြောင်းလေးတွေရေးကြည့်ရအောင်။
အချိန်ရရင်အလုပ်ကြော်ငြာတစ်ခုလောက်ရှာပြီးအလုပ်လျှောက်လွှာတစ်စောင်လောက်အင်္ဂလိပ်လိုရေး ကြည့်ပါလား။ တကယ်လျှောက်လွှာမပို့ဖြစ်လဲရပါတယ်။
Happy Learning English!
[ Daw May May Win, MA (English) (YU), MA (TESOL) (Lancaster University) မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုရေးသား ထားပါသည်။ ]
J@M - Episode 1 - Saying what you are doing
J@M - Episode3- Arranging and interview
J@M - Episode4- An Interview
J@M - Episode5- Meeting New People
J@M - Episode6- Daily Routine
J@M - Episode7- Discussing Projects
J@M - Episode 8 - MeetingaClient
J@M - Episode9- InaRestaurant
J@M - Episode 10 -Talking About Health
J@M - Episode 11 - Making Suggestions
J@M - Episode 12 - GivingaPresentation
J@M - Episode 13 - Thinking About the Future
J@M - Episode 14 - Maria's Story
J@M - Episode 15 - At the Airport
J@M - Episode 16 - Booking intoaHotel
J@M - Episode 17 - Making Appointments
J@M - Episode 18 - Talking about People
J@M - Episode 19 - Talking about Likes and Dislikes
J@M - Episode 20 - Office Activities
J@M - Episode 21 - MakingaRequest
J@M - Episode 22 - Finding out aboutaCourse
J@M - Episode 23 - Travelling by Train
J@M - Episode 24 - Asking Directions
J@M - Episode 25 - Giving Praise
J@M - Episode 26 - Complaining
J@M - Episode 27 - Telling Bad News
J@M - Episode 28 - Talking about Finance
J@M - Episode 29 - Talking about your Life
J@M - Episode 30 - Making an Arrangement
J@M - Episode 31 - Advice and Obligation
J@M - Episode 32 - Sorting out Problems
J@M - Episode 33 - SendingaParcel
J@M - Episode 34 - Jeff's Story
J@M - Episode 35 - Offering SomebodyaJob
J@M - Episode 36 - Giving Advice
J@M - Episode 37 - Talking About Money
J@M - Episode 38 - Professions
J@M - Episode 39 -Talking about Money (2)
Permalink Reply by Ei Swe San on April 9, 2012 at 15:08
Thank you for your teaching, Teacher. It is pretty interesting and useful.
I would like to learn the the use of "when it comes to (Noun),...".
Kindly teach the use of it and thank you.
Permalink Reply by May May Win on April 19, 2012 at 13:11
Dear Ei Swe San
I’m very glad to know that the lesson was interesting and useful. Regarding your question about the use of ‘when it comes to + Noun …’, I’ve foundarelevant definition and examples from the following link:
when it comes to (doing) something when the subject being discussed isaparticular thing
When it comes to holidays, I prefer something lazy.
When it comes to writing letters, she’s hopeless.
I hope this will give you some idea of the phrase.
Permalink Reply by Ei Swe San on April 20, 2012 at 20:19
I appreciate your guidance and giving the link of Macmillan Dictionary.
And I will learn more with it. Thanksalot Teacher.
Permalink Reply by 0waudn4rqicuq on May 1, 2012 at 19:47
Thank you Daw May May Win. This is very useful for me.
"Yours sincerely လေးစားစွာဖြင့် (ဒီနေရာမှာလည်းခုနအစ မှာ Ms Lime လို့ခေါ်လို့ဒီလိုအဆုံးသတ်တာပါ။ Dear Sir/ Madam ဆိုရင် Yours faithfully လို့တပ်ကြပါတယ်။ "
Permalink Reply by 1lo7s4kyyaf7i on May 2, 2012 at 11:46
Permalink Reply by CHIT THU on May 3, 2012 at 14:08
It is really great. I like italot. Thank you for your kind.
Could you please present for us how to write CV.
Permalink Reply by zawwinhtut on May 3, 2012 at 15:47
Permalink Reply by Ein Mon on May 5, 2012 at 14:56
thank u for your post and let me ask sth that i don't understand well. i'd like to know the meaning of
some words from the lyric "I told u so" by Keith Urban; ie. when it comes to u and me
were right i know we should be. What does it (when it comes to u and me) mean?
Permalink Reply by May May Win on May 7, 2012 at 14:32
Dear Ei Mon
Thanks for your question. Please refer to the following sites. You can see explanation on 'when it comes to'. They might of some help for you.
Permalink Reply by Zaw Win on May 30, 2012 at 16:06
It is really kind of you.
Permalink Reply by 3eku3v2p1ps4t on June 21, 2012 at 0:49
Permalink Reply by 29a6k549qdbrt on June 24, 2012 at 19:22
I am very greatful to you,Teacher.I would like to learn more from you.But I can't see Sanjeev's letter clearly in the picture.How can I see it more clearly,Teacher?